LONG XUYEN - Cochinchina - Ny Tany Masina Fandinihana Vietnam
Ny faritanin'i Longxuyen [Long Xuyen] fehezin'ny faritanin'i Chaudoc [Châu Đốc], Rachgia [Rạch Giá], Cantho [Afaka Tho], fotsiny [Sa Đéc] sy tanan [Tan An], ary mitana ny velaran-tany 120.432 ha ao amin'ny faritra andrefan'ny Cochin-China.
Mipetraka eny amboninny haavonny ranomasina, ny fihoaram-pefy isan-taona no miteraka hiteraka tsy fetezay amin'ny faritany. Ny toetrany dia somary salama. Roa kely eo an-tampon-kavoana no nanimba ny tanimboalobony; ny lehibe Sap [núi Sạp] (86m avo) ary ny lehibe Ba The [núi Ba Thê] (210m) no fiakarana avo indrindra amin'ity sehatra ity, ny fiasan'asa izay miasa. Renirano lehibe roa miampita ny faritany, ny Bassac [Bassac] ary ny Mekong [Mê Kông]. Ny tanàna lehibe dia mifandray amin'ny alàlan'ny arabe maro Saigon [Sai Gòn] amin'ny Cantho [Afaka Tho], Vinhlong [Vinh Long] sy mytho [Mỹ Tho], miaraka Saigon [Sai Gòn] amin'ny fotsiny [Sa Đéc] sy mytho [Mỹ Tho], miaraka Rachgia [Rạch Giá], miaraka Chaudoc [Châu Đốc] amin'ny làlanades Administrateurs”Sy amin'ny lalana Tritone. Ny serivisy fiarakodia dia manome antoka ny serivisy amin'ny alàlan'ny paositra sy ny fifamoivoizana mankany Cantho [Afaka Tho]. Ny lakandrano maro no manavaka ny faritany. Renirano renirano amin'ny sambon'ny “Messageries fluviales”Sy ny sambo Shinoa manamora ny fifaneraserana isan'andro Longxuyen [Long Xuyen] sy Saigon [Sai Gòn]. Longxuyen [Long Xuyen] dia mifandray Pnom Penh [Pnôm Penh] amin'ny serivisy sambo mandeha sambo efatra isan-kerinandro. Misy fanompoana isan'andro Chaudoc [Châu Đốc] amin'ny alàlan'ny rano, afa-tsy ny dia alarobia iray-dia lalan-tokana, ary miverina ny dia Alakamisy. To Rachgia [Rạch Giá] isan'andro.
Ny ampahefatry ny eoropeana dia eo amin'ny nosy iray ary misaraka amin'ny teratany karana sy sinoa. Ny trano lehibe indrindra amin'ny trano fitantanana sy trano eoropeana dia: Ny efitrano fanaraha-maso natsangana tamin'ny taona 1905 niaraka tamin'ny biraon'ny birao. Ny Hopitaly, misy pavily, efitrano ho an'ny mpitsabo ary appartment ho an'ny mpitsabo. Ny Fitsarana sy ny trano fonenana amin'ny filohan'ny Fitsarana sy ny mpitsara. Ny biraom-bolam-panjakana misy takelaka ho an'ny mpitahiry vola. Ireo biraon'ny paositra sy telegrama miaraka amina apetraka ho an'ny paositra. Ny fehezin'ny lefitra mpitantana sy ny mpitantana ny Asa vaventy sy ny mpitondra fivavahana. Ny trano sekoly miaraka amin'ny appartments ho an'ny lehiben'ny loham-pianakaviana. Ny apetraky ny polisy sy ny mpiambina sivily. Ao amin'ny Myphuoc [Mỹ Phước] ary ahitana ny appartments tompon'andraikitra amin'ny fidiram-bola. Ny Bungalow akaikin'ny valan'ny "Messageries fluviales”Dia trano iray mampahazo aina amin'ny efitra fatoriana 8 sy efitrano lehibe afovoany. Manakaiky azy ny tranoben'ny club izay misy tranomboky ho an'ny Eoropeana.
Anisan'ireo sangan'asa kanto tsy maintsy voamarikay isika: ny tetezana mitaona naorina tamin'ny 1899 hiampitana ny lakandrano mampifandray Rach Longxuyen [rạch Long Xuyên] sy Bassac [Bassac]. Ny tetezanaHenry”, Naorina tamin'ny 1892 momba ny Rach Longxuyen [rạch Long Xuyên] (rafitra Eiffel). Mirefy 176m, 80 ity tetezana ity. Ny tetezan'i Thotnot [Thốt Nốt] ny karazana mitovy, misy refesina 138m.
1: Marcel Georges Bernanoise (1884-1952) - Painter, teraka tany Valenciennes - ny faritra avaratry ny France. Famintinana ny fiainana sy ny asa:
+ 1905-1920: miasa ao Indochina sy tompon'andraikitra amin'ny Governemanta Indochina;
+ 1910: Mpampianatra ao amin'ny Far East School of France;
+ 1913: mandalina ny kanto indizeny ary mamoaka lahatsoratra manampahaizana;
+ 1920: Niverina tany Frantsa izy ary nikarakara fampirantiana zavakanto tao Nancy (1928), Paris (1929) - sary hosodoko momba an'i Lorraine, Pyrenees, Paris, Midi, Villefranche-sur-mer, Saint-Tropez, Ytalia, ary koa fahatsiarovana vitsivitsy avy any Farany Atsinanana;
+ 1922: Famoahana boky momba ny haingon-trano haingon-trano ao Tonkin, Indochina;
+ 1925: Nahazo loka lehibe tamin'ny fampirantiana kolonialy tany Marseille, ary niara-niasa tamin'ny mpanao maritrano Pavillon de l'Indochine hamorona andiana entana anatiny;
+ 1952: Maty amin'ny 68 amin'ny taonany ary mamela sary hoso-doko sy sary be dia be;
+ 2017: Ny atrikasa hosodoko nataony dia nahomby tamin'ny alàlan'ny taranany.
◊ Boky “LA COCHINCHINE”- Marcel Bernanoise - Hong Duc [Hong Đức] Publisher, Hanoi, 2018.
◊ Ny teny vietnamiana mirehitra sy tsy mirehareha dia apetraka ao anaty marika nindramina napetrak'i Ban Tu Thu.
◊ CHOLON - La Cochinchine - Fizarana 1
◊ CHOLON - La Cochinchine - Fizarana 2
◊ NY THO -O - La Cochinchine
(Visited 1,655 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← ANDRO NINH - Cochinchina
Fandaharana amin'ny tantaran'ny VIETNAMESE - Fizarana 1 (# 2500 taona) →
Comments Off amin'ny vatosoa The RAVEN's Gem
Ny tantaran'ny TU-THUC - Ny Tanin'ny Bliss - Fizarana 1
Comments Off momba ny tantaran'ny TU-THUC - Ny tanin'ny fahasambarana - fizarana 1
Comments Off amin'ny CHAU DOC - Cochinchina
Comments Off momba ny filalaovan'ny Zanaka any VIETNAM - Minitra fihaonambe tamin'ny 22 febroary 1943